Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Julian Nagelsmann Akụkọ nwata
Ihe omuma anyi nke Julian Nagelsmann na-egosi Eziokwu banyere akụkọ nwata ya, Nkuzi ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
N'okwu dị mfe, nke a bụ akụkọ njem ndụ ndị njikwa, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, lelee oge ọ bụ nwata ka ọ bụrụ ebe ngosi okenye - nchịkọta zuru oke nke Julian Nagelsmann's Bio.
Mmalite Ndụ na Nbili nke Julian Nagelsmann.
Ee, onye ọ bụla maara Julian Nagelsmann maka nke ya Agwọ Ọkpụkpụ, eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nwata ma were ya dịka otu n'ime uche nchịkwa kacha achọsi ike na egwuregwu ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na -atụle ụdị Julian Nagelsmann's Biography nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ nwata Julian Nagelsmann:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Nwa Mourinho“. Julian Nagelsmann mụrụ nne ya, Burgi Nagelsmann, na nna nwụrụ, Erwin Nagelsmann na ndịda ọdịda anyanwụ Bavaria, Germany. Nwa Mourinho ka akpọrọ ya aha amụrụ ya dị ka nwa ikpeazụ nke ezinụlọ ya.
Julian nke aka anyị toro na ezi na ụlọ ya na nwanne ya nwoke nke okenye (Andre) na nwanne ya nwanyị (Vanessa), na Landsberg na Lech, obodo dị na Osimiri Lech na ndịda ọdịda anyanwụ Bavaria, Germany.
Ị maara?… Landsberg na Lech bụ obodo echekwara echekwara echefu nke ọma, nke a maara maka ụlọ mkpọrọ ya kama ịbụ olulu egwuregwu bọl. Ọ bụ n’obodo a Adolf Hitler ịnọ n'ụlọ mkpọrọ (1924). (ooh! i nwetara ikike ahụ). Ọ bụkwa ebe obibi ogige ịta ahụhụ ndị Nazi.
Obodo, ebe ọ bụ naanị nkeji iri atọ na ise iji ruo Munich na 38 min mbanye ka Augsburg nyere Julian na nwanne ya nwoke tọrọ ya egwuregwu ime egwuregwu.
ulian Nagelsmann's Family Home town na Landsberg am Lech bụ naanị 58 nkeji ụgbọala gaa Munich.
Ezigbo ezinụlọ Julian Nagelsmann na ndụ mbido:
Ndị nne na nna Julian Nagelsmann (Erwin na Burgi) sitere na ezinụlọ German ma ha na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ.
Ọ bụghị ọgaranya karịsịa, nne na nna ahụ nyere ụmụ ha aka (Julian, Andre, na Vanessa) nụrụ ụtọ oge ha bụ nwata.
Ọnwụ Nna ya:
Na mbido, ezinụlọ Julian Nagelsmann hụrụ oge mwute na ndụ ha. Ọ bụ oge otu n'ime ha (Erwin papa ya) tara ahụhụ na ọrịa. nwụrụ mgbe ọrịa dị mkpirikpi gasịrị. N’enweghị ike ịnagide ahụhụ ya, Erwin gafere.
Ọnwụ nna Julian Nagelsmann gbanwere ọtụtụ ihe n'ezinụlọ ya. N'ịbụ nwa ikpeazụ na nwa nke ezinụlọ, Julian ga -etolite iji lekọta nne ya ebe ụmụnne ya na -agara ezinụlọ ya nri kwa ụbọchị.
Ịchụ nrọ ya, ka ọ ghara imechu nna ya ihu wetara ntozu okè. N'okwu ya;
“Ha niile mere ka m tozuo eto ma bawanye na ndụ m. Emere m ihe ndị na-adịghị njọ nye onye ọgbọ m. ”
Julian Nagelsmann Biography - Afọ ndị mbụ tupu ịgba bọọlụ:
Na mbido, ọ bụ ihe gbasara ịbụ ndị egwuregwu bọọlụ. N'ịtụgharị uche n'okwu nna ya n'ịnọgide na -enwe ebumnuche ya wee nwaa ime nke ọma, Julian na -eto eto nwere mkpali ibi ndụ nrọ ya.
Mgbe ya na FC Augsburg na-egwu bọọlụ nwa oge, nwata ahụ gakwara akwụkwọ. O mechara hapụ ọrụ ya na FC Augsburg dị ka onye na -akwado ya nke ọma.
Onye nchịkwa German malitere dị ka onye na-agbachitere ya - you nwere ike ịhụ ya mgbe ya na ndị otu ya nọ?.
Julian Nagelsmann Bio - Akụkọ ergba Egwuregwu Ọrụ:
Ọnwụ nna ya nyere Julian ọrụ zuru oke, nke nyeere ya aka itolite ma zụlite nke mbụ dị ka onye egwuregwu agụmakwụkwọ na mgbe e mesịrị, onye egwuregwu bọọlụ.
N'afọ 2006, onye nchịkwa German n'ọdịnihu tụgharịrị pro na 1860 Munich II, klọb egwuregwu dabere na Munich. Foto dị n'okpuru, ọ bụ onye na -agbachitere ya nnukwu ebumnuche N'oge ọ na-egwu egwu.
Julian Nagelsmann egwu ụbọchị. Ọ bụ onye na-agbachitere ya na BIG AMBITIONS.
N'oge ahụ, klọb ya na -egwuri egwu na Bundesliga na Nagelsmann nyeere ha aka inweta ezigbo ngwụcha na 2000, kwa, ntozu UEFA Champions League. Ọ dị nwute na mmerụ ahụ na -adakwasị ya, ọ nweghị ike inyere klọb aka iwulite ihe ịga nke ọma ha.
The Njedebe Ihe mgbu na Ọrụ Nlekọta Ya:
Mgbe ndị otu ibe ya gara n'ihu guzobe onwe ha na Bundesliga, mmerụ ikpere mere ka ọ ghara ịnụ ụtọ bọọlụ ya. Ọ dị nwute, mmerụ ikpere Julian Nagelsmann jụrụ ịgwọ ọbụlagodi mgbe ọ hapụrụ klọb ahụ na FC Augsburg II na 2007.
Ọ dị nwute n'otu nwata ahụ nke 20, ndụ Julian Nagelsmann mechara nweta tonado, mba ekele nke a mebie ligamenti cruciate. N'oge a, a manyere ya ịla ezumike nká n'oge egwuregwu.
Imeso ezumike nká mgbu:
Ogbenye Julian Nagelsmann mere ọtụtụ izu n’ebughị ụra nke ọma ka ọ na-agbasi mgba ike ikpebi ihe ọ ga-eme na ndụ ya mgbe ọ kwụsịrị ọrụ ya mgbe ọ gbara afọ iri abụọ.
“O wutere m nke ukwuu na m ga-akwụsịcha ọrụ m dị obere. Na mbụ, achọghị m ka ihe ọ bụla jikọọ m na football, ”
Mgbe o mechara nyefee ebumnuche ya gbasara igwu egwu, ogbenye Julian Nagelsmann gabigara a "anọ ruo izu isii ” ebe o debere onwe ya na emeghị ihe ọ bụla. Ndị otu Julian Nagelsmann ọkachasị nne ya, nwanne ya nwoke nke ukwuu, na nwanne nwanyị nyere aka n'oge ahụ.
Ha dụrụ ya ọdụ ka ọ gaa n'ihu. Iji ghara ịda mbà na nna ya nwụrụ anwụ, Julian kpebiri ịlaghachi akwụkwọ dịka ụzọ isi tụba onwe ya n'ihe dị iche. Ọ gụrụ akara bachelor na egwuregwu na sayensị ọzụzụ.
Julian Nagelsmann Biography- Okporo ụzọ nke aha onye njikwa:
Ị maara?… Ọ bụbu onye njikwa Borussia Dortmund Thomas Tuchel onye mechara bụrụ onye nkuzi PSG nke buru ụzọ lekọta Julian.
Onye ọka mmụta, afọ 14 nke okenye nwere ike ịkọ maka ihe mgbu Nagelsmann n'ihi na ya onwe ya nwekwara nnukwu mmerụ ikpere nke na -ebelata ụbọchị ya dị ka onye egwuregwu. Nke mbụ, ọ tụgharịrị ụzọ Nagelsmann site n'ime ka ọ bụrụ onye nyocha ya.
Mgbe Nagelsmann na-arụ ọrụ dị ka onye na-achọ Tuchel na Augsburg II, ọ maghị na ọ ga-abụ onye nchịkwa. Otu ụbọchị, onyeisi Tuchel gakwuru ya, na -adụ ya ọdụ ka ọ nwalee ụzọ nkuzi.
Mgbe ọnwa ole na ole itinye akwụkwọ maka ọrụ nkuzi, onyinye nyere ya ka ọ rụọ ọrụ maka 1860 Munich dị ka onye nchịkwa inyeaka n'okpuru afọ 17 na 2008. Nagelsmann nwere obi ụtọ kpebiri ịnwale ya.
Mgbe o nwetara ohere inweta ya na 1860 Munich, Nagelsmann mara ozugbo na ịnye ọzụzụ bụ akara aka ya. Nke ahụ nyere ya ihe kpatara ịmalite usoro agụmakwụkwọ sayensị n'agbanyeghị na ọ jụrụ BMW onye nwara inye ya ụzọ ọhụrụ. N'oge na-adịghị anya, ọrụ nchịkwa ndị ntorobịa Hoffenheim gbasoro.
Julian Nagelsmann Bio - Bilie na Akụkọ Ama:
Ire mbụ nke ihe ịga nke ọma Julian Nagelsmann bịara mgbe o meriri otu 2013–14 N'okpuru 19 Bundesliga ya na ndị otu Ho19 nke Hoffenheim.
Agbanyeghị, ihe ịma aka kasịnụ nke ndụ ya bịara mgbe ọ dị afọ 28, oge ka akpọbara Nagelsmann n'oche dị ọkụ.
Gịng tanach họpụtara ka ọ bụrụ onye isi nchịkwa Hoffenheim (kpomkwem na February 2016) mgbe ọ wepụrụ ọchịchị onye ọka iwu vetiranti Huub Stevens, onye gbara arụkwaghịm n'ihi ihe ahụike. Site na nhọpụta a, Nagelsmann ghọrọ onye nchịkwa isi nke ọdụdụ nwa na-adịgide adịgide na akụkọ ntolite Bundesliga.
Ị maara?… TSG 1899 Hoffenheim nọ ebe 17 na Julian Nagelsmann buliri ha na nchekwa site na njedebe nke mkpọsa ahụ.
Iweghara Hoffenheim n'ọnọdụ dị oke egwu na -atụ ụtụ ego, mana ụzọ Nagelsmann ga -ejikọ agha maka ịlanarị na mmezu ntozu nkuzi ya masịrị ndị na -amasị ya nke ukwuu. Ihe egwu a mere ka ọ tụọ vootu dịka "onye nchịkwa 2016 nke Afọ ”.
Igwe ihu igwe ya na TSG 1899 Hoffenheim hụrụ ya ka ọ na - emeri onye nchịkwa 2016 nke onyinye afọ ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, Nagelsmann bụ onye nzọpụta n'iji ijikọ echiche ndị dị na ya site na iji aka emetụ ya, ihe fọdụụrụ bọọlụ nke oge a. Chọta n'okpuru vidiyo zuru oke nke na-akọwa ihe kpatara ya ji bụrụ onye pụrụ iche.
N'agbanyeghị na a na-etu aha ya 'Baby Mourinho'Na mbido ọrụ nkuzi ya, Julian Nagelsmann egosila na ya bụ nwoke nke ya.
E gosipụtara nke a na mmeri ụkwụ mbụ ya na Nke Pụrụ iche na oge asọmpi 2019/2020 UEFA Champions League Knockout. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Julian Nagelsmann si Nwa agbọghọ, Nwunye na Nwa:
Site na ihe ịga nke ọma niile ọ nwetara n'oge ọ dị obere, o doro anya na ọ ga -abụrịrị na ọtụtụ ndị egwuregwu German na ndị egwuregwu bọọlụ n'ụwa niile amalitela ịtụgharị uche onye enyi nwanyị Julian Nagelsmann nwere ike ịbụ.
N'ikwu nke a, ma onye nkuzi German alụọla, nke pụtara na inwela nwunye yana ikekwe ụmụaka.
Dabere na Onyeka Onwenu, Julian bụ a Ezinaụlọ ya na nnukwu obi. O nwere mgbe ya na enyi nwanyị ya na ya na-anọ ogologo oge, Verena. Ha abụọ, di na nwunye (eserese n'okpuru) bụ nne na nna nwa nwoke a na-akpọ Maximilian Nagelsmann.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Julian Nagelsmann kpebiri ịlụ Verena. Alụmdi na nwunye ahụ mere na Bavaria, n'ihe yiri ka emechiri emechi. Zute nwunye Julian Nagelsmann na foto a mara mma n'okpuru.
Zute Nwunye Julian Nagelsmann, Verena.
Nwoke ọ bụla ezughi oke na-enweghị ezinụlọ na Julian Nagelsmann abụghị otu. Ọ na-enweta ọ joyụ dị ukwuu site na nwunye ya na nwa ya.
Dị ka onye nkụzi German na-eto eto si kwuo, “Ọ na-enyere aka nke ukwuu mgbe ị lọtara n'abalị wee hụ na ị nwere onye mmekọ na nwa nwoke“, Ọ gwara akwụkwọ akụkọ German picture. Nwunye Julian Nagelsmann, Verena na-akwado ya n'ụzọ dị ukwuu ma n'ihi nke ahụ, ọ nwere ike ilekwasị anya na ọrụ ya.
Julian Nagelsmann Web:
Malite, onye nkuzi German na -eto eto na -ebi ndụ a haziri ahazi, nke gụnyere mmefu ebumnuche na ihe ndị ọ hụrụ n'anya n'onwe ya.
Inwe ọnụ ahịa ruru nde $ 5 ezuola Nagelsmann inwe nnukwu ụlọ na mpaghara Munich na nke kachasị mkpa, nweta ụgbọ ala nrọ ya- Ndi Jaguar.
Onye na-eto eto German onye nkuzi bụ onye na-akwado Jaguar- nhọrọ ụgbọ ala ya.
Gini mere Julian Nagelsmann ji enwe mmasị n'ebe Jaguars nọ? Ma eleghị anya n'ihi na ọ naghị enye ya ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe kachasị mma na ụdị enweghị nkwekọrịta. N'ikwu nke a, ụgbọ ala ya nwere teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke na-ahụ maka nchekwa kacha mma n'ịkwọ ụgbọ ala ya kwa ụbọchị.
Nnukwu ihe mere Julian Nagelsmann ji hụ Jaguar Car n'anya.
Ndụ nkeonwe Julian Nagelsmann:
Bido n’elu, ọ bụ onye nwere mmasị ịnara Egwu RISKS na echiche kacha mma na -abịa n'isi ya mgbe ọ na -asa ahụ ụtụtụ ya.
N'ikwu okwu banyere nnukwu ihe egwu, na 2016, ọ bụ ihe egwu nye Julian Nagelsmann ịnakwere ọrụ nkuzi TSG 1899 Hoffenheim na -emechaghị akwụkwọ ikike onye nkuzi bọọlụ. N'ikwu banyere ahụmịhe ahụ, o kwuru otu oge;
Agara m ule ikpeazụ m, m na-eche nnukwu nsogbu, na uche m, n'oge agha.
Ọ bụ izu ike nke ndụ m, n'oge m chere na agaghị m anọte ndụ karịa afọ 30! ”
Otu o si ejide ndị egwuregwu okenye:
Dịka onye nchịkwa na-eto eto, Nagelsmann na-eji ike Leo Zodiac, nke dị adị ihe okike, nwere mmasi, mmesapụ aka, onye nwere ọmịiko, nwere ọ joyụ, na ihe ọchị ijikwa ndị egwuregwu, ọbụlagodi ndị tọrọ ya.
N'oge ahụ, ndị egwuregwu ise nọ n'otu egwuregwu Hoffenheim tọrọ ya. Klọb ahụ nwere isi asaa n'akụkụ nchekwa. Ọbụlagodi na o nwere ihe niile nwere ike iji anya mmiri mechie, ọ nweghị mgbe ọ mere.
Dị ka Julian si kwuo, imeso ndị okenye egwuregwu adịghị mgbagwoju anya. Ọ na -ewe naanị onye nchịkwa nke anaghị adị oke njọ n'ihe niile.
N'ụzọ bụ isi, Julian bụ onye na -enwe mmasị ịchị ọchị ma nwee mmasị isoro ndị egwuregwu ya niile (ndị okenye na ndị na -eto eto) kwurịta ihe gbasara onwe ha.
Ibelata Social Media:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọgbọ ya, Julian Nagelsmann ekweghị na Social Media, nke pụtara na ọ nweghị ọnụnọ mgbasa ozi mmekọrịta. Nke ahụ apụtaghị na o mebeghị akaụntụ mgbasa ozi ọhaneze. N'ezie ọ mere obere oge ka ọ ghọchara onye isi Hoffenheim.
Ihe ndekọ ahụ nwetara ihe karịrị ndị na -eso ụzọ 43,000 tupu o kpebie mechie ya. Onye nnọchi anya Nagelsmann Marc Kosiscke (onye bụkwa onye ndụmọdụ Jurgen Klopp) kwuru otu oge banyere ihe na -amasị onye ahịa ya na mgbasa ozi mmekọrịta. N'okwu ya;
“Dị ka onye nchịkwa, echeghị m na ị chọrọ mgbasa ozi mmekọrịta. Julian nwara ya ntakịrị n'ihi na ọ chọrọ ịhụ ka mmekọrịta ahụ dị. Maka m, echeghị m na ọ bụ echiche ọjọọ n'ihi na ọ bụ akụkụ nke ọgbọ na-eji ya. Ma maka ya, o mesịrị jụọ, gịnị bụ isi ya? ”
Marc Kosiscke kwuru nke a mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ Die Welt, akwụkwọ akụkọ mba dị iche iche nke German.
Ndụ ezinụlọ Julian Nagelsmann:
Mgbe mmadụ kwuru na ezinụlọ na -ebute ụzọ, ọ pụtara na onye ahụ nwere ezinụlọ ya dịka ihe kacha mkpa na ndụ ya. Nke a bụ ihe gbasara onye nkuzi German na -eto eto.
Na ngalaba a, anyị ga -ewetara gị akụkọ gbasara ndị ezinụlọ Julian Nagelsmann malite na nne na nna ya.
More banyere papa Julian Nagelsmann:
Tupu ọnwụ ya, Erwin Nagelsmann bụ nwoke nwere anụrị mgbe niile, onye na -achọkarị ka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya nwee ihe dị mma gbasara ndụ, na -agbakwa mbọ ime nke ọma.
Maka nke ahụ, Julian ga -etolite ngwa ngwa karịa ndị ọgbọ ya, ọbụnadị tozuru oke. Ọ hụrụ na ọ malitere ibi naanị ya n'oge ọ dị afọ iri na ụma, ebe ọ na -agba bọọlụ ntorobịa. Afọ ole na ole Erwin nwụsịrị, Julian Nagelsmann abụrụla nwoke n'akpa nwa nwoke.
Ahụrụ m ya dị ka ibu ọrụ m ilekọta ihe na ịnagide ihe ọ bụla ọnwụ nna m metụtara. ”
na-eto eto German nchịkwa kọwara.
More banyere mama Julian Nagelsmann:
A na-ahụkarị Burgi Nagelsmann dị ka “super ike nwanyi“, Otu onye nwere ike chịkọta obi ike iji gaa n'ihu na ahụike, na-akwado ndụ mgbe di ya, Erwin nwụsịrị.
Site n'enyemaka nke nwa ya nwoke, ọ nwere ike ree ụlọ di ya nwụrụ anwụ, zụta nke ọhụrụ yana kwa, na -ahụ maka mkpuchi ụgbọ ala ya.
Super Birgi (nke dị n'okpuru) na -enwe nganga n'ịzụlite ụmụaka nwere ihe ịga nke ọma, nke bụ ule kacha ukwuu na ndụ ya mgbe Erwin nwụsịrị.
Julian Nagelsmann Ndụ Ezinụlọ- N'ebe a, ya na nwanne ya nwanyị Vanessa Furkert na nne ya Burgi Nagelsmann sere foto.
Banyere Nwanne nwanyị Julian Nagelsmann:
Zute nwanne nwanyị okenye nke Julian Nagelsmann, Vanessa onye Foto dị n'etiti ya na nwa ya nwoke bụ Julian na mama. Na-ekpe ikpe site na aha nna ya (Vanessa Furkert), ọ na-egosi Vanessa alụọla nwaanyị.
ọ nyere aka na-enyere ezinụlọ ha aka ka enwee ego mgbe Erwin nna ha nwụrụ. Ọtụtụ oge, Vanessa na-anọghị n'ụlọ gaa ọrụ, ihe osise nke hụrụ Julian na-eto eto na-elekọta ihe niile, gụnyere mama ya.
Banyere Nwanne Julian Nagelsmann:
Zute nwanne Julian Nagelsmann (André) onye nọ n'oge ederede, onye ntụrụndụ egwuregwu nke mpaghara egwuregwu Rhön site na Disemba 1st, 2016. A mụrụ André na Osnabrück, mana toro na Isia na Landsberg am Lech district.
Zute Nwanna Nwanna Julian Nagelsmann, André Nagelsmann.
Nwa nwoke nwoke okenye nke Julian Nagelsmann (André) bụ nwoke na-arụsi ọrụ ike, mana ọ nweghị ihe ịga nke ọma dị ka nwanne ya nwoke. O jikọtara ya na bọọlụ na-amu amu nke obodo n'oge ndụ ya niile, ihe ọ malitere mgbe ọ dị afọ 11 na FC Issing.
Mgbe ọ dị afọ 17, nwanne nwoke Julian Nagelsmann André kwụsịrị ịgba bọọlụ na-amakarị iji bụrụ onye ọka ikpe. Nwoke lụrụ nwanyị nke nọ n'afọ 40 (n'oge ederede) bụkwa onye njem na-achọ oke njem, onye hụrụ ịga ije na Alps.
Julian Nagelsmann Eziokwu:
N'ezie #1: Old School Vinage Mercedes:
Na Germany, ndị a na-akwanyere ùgwù ADAC Rally "Heidelberg Mere Ihe Akụkọ”Bụ ihe dị oke mkpa maka ndị nwere mmasị n'ịkwọ ụgbọ ala. Julian Nagelsmann nke anyị nwere mmasị isonye dịka ọ hụrụ ụgbọ ala ochie n'anya, ọkachasị ụlọ akwụkwọ ochie ya Mercedes.
N'ụtụtụ nke ụbọchị nkwado, Julian na-agbago ụkwụ bọọlụ Bundesliga n'isi ụtụtụ wee sonyere ngwugwu ahụ ya na Mercedes 300 SC site na 1955. Lee onye nkuzi bọọlụ pụrụ iche!
Onye na-eto eto German na-aga Heidelberg Rally na ochie ochie Mercedes.
N'ezie #2: Banyere Aha Nwata aha Baby Mourinho:
Enyere Julian Nagelsmann 'Nwa Mourinho'na nsọpụrụ onye isi Portuguese Jose Mourinho onye nwere ihe ịga nke ọma dị ka o mere na mgbe ọ dị obere, n'oge a, ya na Porto. N'ikwu okwu banyere mbido aha ya, Julian kwuru otu oge;
“Ee, akpọrọ m nwa Mourinho n’oge mbụ na TSG 1899 Hoffenheim, mgbe m bụ onye nchịkwa n’ebe ahụ. Otu n'ime ndị na-eche m nche, Tim Wiese na-azụkarị ọzụzụ na Sọnde n'ihi na ọ naghị egwuri egwu ụbọchị gara aga na mberede ka ọ bịara jiri aha ya bụ Baby Mourinho.
Amaghị m ihe kpatara ya, ọ bụ ezie na ọ hụrụ ụfọdụ myirịta. Echeghị m na nkà ihe ọmụma anyị bụ otu ihe ahụ. ”
Ndi Julian Nagelsmann kwesiri ka [[Baby Mourinho 'tag]?…. Gbanyụọ ihe ị kwuru na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
N'ezie #3: Ọda Ya Na-akwụ ụgwọ:
Kemgbe ihe ya na Hoffenheim ma ugbu a na RB Leipzig, ndị ọkpọ amalitela na-enyocha Julian Nagelsmann eziokwu, etu ọ siri na-enweta ego dị ka onye njikwa.
Na 21 June 2019, Nagelsmann mechiri nkwekọrịta afọ anọ na RB Leipzig, otu nke hụrụ ya na-etinye ego na-akwụ ụgwọ ihe dịka €5m kwa afọ (Dw Akụkọ).
Ugbu a chọta n'okpuru mmebi nke ụgwọ ọnwa Julian Nagelsmann; kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, awa, nkeji na sekọnd.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Julian Nagelsmann'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nwa nwoke n’etiti UK kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 9.2 iji kpata £ 416,666 nke bụ ego Julian Nagelsmann na - enweta na 1 ọnwa.
N'ezie #4: ya Ndekọ Worldwa:
Ọbụna na-enwetaghị nkwekọrịta na mpụga Germany, ihe ịga nke ọma Nagelsmann gafere mba ụwa. N'ọnwa Ọktọba 2017, ọ ghọrọ onye isi nchịkwa mbụ na bọọlụ ụwa ka ọ debanye aha maka Ebumnuche Mgbaru Ọsọ nwere Juan Mata na egwuregwu bọọlụ.
Nke a bụ otu esi arụ ọrụ: Ndị na - agba bọọlụ na-ekwe nkwa opekata mpe otu ụzọ n'ime ụgwọ ọrụ ha na mkpokọta mkpokọta nke ndị otu obodo nọ na Berlin na-achị. egwuregwu bọọlụ.
Ndị nnọchi anya Bundesliga sonyere onye nkuzi German bụ; Mats Hummels, Serge Gnabry, na Shinji Kagawa na ịdebanye aha maka ihe bara uru.
N'ezie #5: Okpukpe Julian Nagelsmann:
Mgbe anyị tinyechara ọtụtụ awa na ịntanetị na eziokwu a, anyị amatala na ndị nne na nna Julian Nagelsmann yikarịrị ka ha zụlitere ya ịnakwere okwukwe okpukpe Ndị Kraịst.
Ị maara?… Aha ya “Julian”Bu uzo di iche nke aha BaibulJulius", Nke sitere n'asụsụ Hibru na ihe ọ pụtara bụ"dụ-geeru nụ“. Ọzọkwa, “Vanessa”Nke bụ aha nwanne ya nwanyị bụ aha nwa agbọghọ nke Onye Kraịst.
Julian Nagelsmann si Wiki:
Chịkọta akụkọ banyere Julian Nagelsmann, anyị na-ewetara gị ugbu a Wiki Biography Eziokwu. N'okpuru ebe a bụ tebụl dị n'okpuru, ị ga-enweta ozi gbasara ya n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Julian Nagelsmann's Biography Eziokwu (Nnyocha Wiki)
Aha n'uju: Ọ bụ Julian Nagelsmann.
aha otutu: Nwa Mourinho.
Ebe amụrụ onye: Landsberg am Lech, West Germany.
Ndị nne na nna: Burgi Nagelsmann (nne) na Erwin Nagelsmann (nna mbubreyo).
Ụmụnne: Vanessa Furkert (Nwanna Okenye) na André Nagelsmann (Nwanna Okenye)
Age: 32 (Ka ọ na Machị 2020)
elu: 1.90 m (6 ft 3 na)
Onye nnọchite anya: Marc Kosiscke
Omume Nke Ndụ: Okike, na-ahụ n'anya, na-emesapụ aka, obi na-ekpo ọkụ, na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị.
Otu dị ugbu a: RB Leipzig (onye njikwa dịka ọ bụ na Machị 2020)
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Julian Nagelsmann Childhood Plus Untold Biography Eziokwu.